The Beauty Of The Bernina Express | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Qeqesha Ukuvakasha eSwitzerland > The Beauty Of The Bernina Express
Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 07/08/2020)
Bernina Express is one of the most beautiful isitimela kulolu hambo emhlabeni. Okokuqala nje, Use uRauma Line kusukela Dombas ukuze Andalsnes (Norway), ungakwazi ukujabulela imibono iphakama okusezingeni eliphezulu. Ngaphezu kwalokho, ungabona emaceleni ale ntaba futhi Amathafa njengoba uphase uRauma River. Ngaphezu kwalokho, you can also see Europes highest rock face Trollveggen and the gorgeous inkukhu kwebhuloho.
isithombe ekhexisayo Cinque Terre Italy.
Use Cinque Terre phakathi Levanto noLa Spezia (Italy), uphase ngemizi isithombe-ephelele, neminqumo, izivini, and the unforgettable turquoise Ligurian Sea. I Central Rhine sesitimela phakathi Bingen futhi Koblenz (Germany) kufana okuthile a Fairytale nge izinqaba lasendulo phezu kwamanzi.
Mhlawumbe amahle kakhulu futhi enchanting ebabazekayo ujantshi Ukugibela eYurophu iyona Bernina Express. Of all the ebabazekayo Swiss ugibele isitimela, Bernina kuyinto enhle kunazo. Lokhu ngesitimela izipesheli ukubukwa-panoramic kusukela Chur & St Moritz e-Switzerland empumalanga eningizimu kuya Tirano e inyakatho ye-Italy. Lokhu ngesitimela kuthatha cishe 4 amahora njengoba ukumboza 90 zamakhilomitha ukusuka kweqhwa yeSwitzerland elangeni elase-Italy. Loluhambo lwekutfola imayelana nani 55 imihubhe phezu 196 amabhuloho. I ujantshi kwaba iphelile 120 ubudala futhi kuyinto UNESCO amagugu wezwe isayithi. I Bernina Express abelana umugqa ne Glacier Express futhi ihlanganisa wonke Landwasser Viaduct. Vala Pontresina, isitimela ukhuphukela Bernina Pass, ke Morteratsch Glacier. Izitimela Indawo ephakeme kakhulu ngesikhathi Ukunakekelwa kwezempilo Bernina okuyinto ihlala phezu 7000 zamamitha ngaphezu kolwandle.
Ngakolunye uhlangothi kule ntaba, isitimela odlula uquqaba izihlahla ngaphambi kokumisa emzaneni olunothile Poschiavo. Isitimela okuphuma maqondana nendumezulu Brusio Kuvunguza Viaduct. Cishe zonke izithombe kule ndlela engihamba ngayo zenzeke lapho.
Cologne ukuze Koblenz Izitimela
Essen ukuze Koblenz Izitimela
TRIER ukuze Koblenz Izitimela
Nazi ezinye ulwazi olusemqoka uma ucabanga ukuzibulala isitimela Bernina Express;
Uma ukuhamba ebusika, umzila obheke enyakatho ikakhulukazi yohambo lapho kuba mnyama, ngakho ngeke uphuthelwe eziningi nezindawo ezinhle.
Ngaphezu kwalokho, isigaba sesibili muhle kakhulu kule isitimela zonke izinkonzo efanayo ekilasini lokuqala, ngakho asikho isidingo ukukhokha imali ethe xaxa ngaphandle uma ufuna kancane ngaphansi ophithizelayo zihlalo.
Use Iqonde eningizimu isitimela, ufuna ohlezi ngakwesokunene isitimela. Kusukela Switzerland kwenkundla ingabonwa kusukela kulolu hlangothi. futhi esitimeleni obheke enyakatho, ufuna ahlale ohlangothini sobunxele.
Amawindi ezinkulu-panoramic musa ukuvula. Kukhona ukuvuleka elincane eduze iminyango isitimela. Ungathatha izithombe zakho kusukela kubo (ngaphandle kokubakhona reflection).
Ingabe uhlela uhambo phezu Bernina Express? Kungani ungake uzinike 3 imizuzu futhi uthole athenge amathikithi esitimela ngemali eshibhile ku www.saveatrain.com . Gcwalisa usuku nesikhathi ongathanda ukuhamba, futhi thina izokunikeza intengo engcono ukuze nithathe uhambo lwenu, ukuthi kungenziwa kukhokhelwe ngezindlela eziningi kuhlanganise PayPal futhi Bitcoin.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbeautiful-bernina-express%2F - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
#bernina #berninaexpress Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi travelswitzerland